Top 10 Free Photoshop lagu bedelan karo - bedelan karo oo bilaash ah si ay u Photoshop
> Resource > bedelan karo > Hel lagu bedelan karo oo bilaash ah si ay u Photoshop iyo raaxaysta Photo Faalladaada
Dhab ahaantii, Adobe Photoshop waa software tafatirka sawirka ugu awooda badan adduunka. Labada amateurs iyo xirfadlayaasha jeclahay. Si kastaba ha ahaatee, Photoshop waa mid aad u qaali ah oo aan mid kasta oo u awoodi karin. Taasi waa sababta dad badan ay raadinayaan xal kale Photoshop lacag la'aan ah si ay u edit karaa sawiro heerka ugu wanaagsan ee weli aan kharash kasta.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa ay raadinayaan xal kale oo lacag la'aan ah in Photoshop , aad jeclaan doono qodobkan. Halkan waxaan doonayaa in aan ka hadlo 10 kale oo Photoshop lacag la'aan ah.
Free Photoshop kale 1: GIMP
GIMP waxaa loo aqoonsan yahay "free Photoshop" leh tafatirka sawir badan oo la mid ah Photoshop. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u abuuraan dhowr lakab oo sawir, isku dubaridi meelo ka gaarka ah ee sawirka, la abuuro filtarrada, iwm sokow, waxa ay taageertaa qaabab file badan, oo ay ku jiraan PSD Photoshop. Dad badan ayaa la yidhaahdo GIMP waa free Photoshop tafatirka software sawir kale oo wanaagsan ee.
Free Photoshop kale 2: Paint.NET
Paint.NET waa editor sawirka ugu dhaqsiyaha badan u bilaash Windows. Iyadoo interface ah dareen iyo taageero layers, tirtireyso aan xad lahayn, saamaynta sawir gaar ah, waxaa guud ahaan soo dhoweeyeen bulshada. Qaar ka mid ah qalabka kale ee tafatirka sawir weyn sidoo kale la siiyaa.
Free Photoshop kale 3: Photoscape
PhotoScape yimaado la interface user-friendly ah. Waxay awood u isticmaala inay xaalkaa sawirada iyo sidoo kale la abuuro GIF. In kasta oo aysan u leedahay waxyaalo badan sida in Adobe Photoshop, users badan oo weli u eg-tahay, sababtoo ah in a cilcks yar mouse, users u xoojin karto sawiro ay ka resizing, qabsiga midabka, dheelitirka cad, iyo hagaajinta backlight, mab, isagoo intaa ku daray qoraalka, barbaro sawirada, ka saarida isha casaan, iwm
Free Photoshop kale 4: xeebteeda
Xeebteeda waa kaliya editor sawir Mac lacag la'aan ah qaabka qunbuhu. Gradients, qaabab iyo anti-aliasing labada stroke burush ad text waxaa la siiyaa. Waxa uu isticmaalaa qaab faylka sae hooyo ku salaysan agagaarka GIMP ee technology.
Free Photoshop kale 5: Artweaver
Artweaver waxay bixisaa noocyo kala duwan oo qalab rinjiyeynta sida qaabab kala duwan burush, saamaynta caadiga ah sida afaysto, qasayo iyo embos, iwm si ay kaaga caawiyaan in aad hal-abuur leh rinji. Ka sokow, waxay bixisaa taageero kiniin qalinka wanaagsan.
Free Photoshop kale 6: Inkscape
Inkscape waa editor naqshadeynta oo lacag la'aan ah oo la mid ah Adobe muujiye, Isku Aadka Corel, beege, ama Xara X. Its isticmaalka scalable dulinka Graphics (SVG), furan heerka W3C XML-ku salaysan, sida qaabka hooyo dhigo mid ka duwan software kale photoe diting .
Free Photoshop kale 7: macnayahay
Pixen waa editor free sawir for Mac . Waxaa la iman qaababka badan sida layers sawir, animation abuuray, palette, iwm Waxa kale oo ay taageertaa noocyada files badan oo kala duwan.
Free Photoshop kale 8: Rinjiga Brolin
Rinjiga Brolin waa online flash ku salaysan editor ah image lacag la'aan ah ee ay soo Brolin Ltd. Waa arrin aad u la mid ah Photoshop, in in ay qoreysa badan oo ah qalab isku mid ah, laakiin Rinjiga Brolin waxa jira shaci iyo sawirrada, halkaas oo software kale sida Photoshop badan yihiin haboon u culus tafatirka image.
Free Photoshop kale oo 9: CinePaint
CinePaint waa editor sawir xor ah laga heli karaa Linux, Mac iyo BSD. Waxay badi loogu talagalay rinjiyeynta iyo bitmap retouching looxyada filimada sida Scooby-Doo, Harry Potter iyo Philosopher ee Stone, Last Sumarai iyo Stuart Little. Tababaraha jir ah, guu- basasha, oo awood u leh inay la pixels 16-yara iyo dhibic yeelay Dhalanteed la shaqeeyaan kala duwan oo sare imaging firfircoon (Human Development Report) waa sifooyinka gaarka ah ee this software tafatirka sawir oo lacag la'aan ah.
Free Photoshop kale 10: PhotoFiltre
PhotoFiltre kooban yahay weli qalabka tafatirka sawir aad u awood badan. Sababtoo ah ay size yar, waxa ay maamushaa dhakhso. Doorashada dulinka, shareeraysaa, qasayso, automatization iyo plugins waa feature ugu weyn ee this software tafatirka image lacag la'aan ah. Ka sokow, waxa loo isticmaali karaa siladda image ah iyo Converter sida.
The Best 5 Free Mac Photo Editors u Photo ayeey ee Mac
Best Recuva Alternative in Windows iyo Mac OS X
Top 5 lagu bedelan karo Undelete 360
Top 10 kale oo ay tirtirto Doctor si ay u bixiyaan qaab ka sii fiican